Die Casting စက်အစိတ်အပိုင်းများ - စိတ်ကြိုက်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ - Minghe Casting
Casting & Cnc Machining မှစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အဖြေ
IATF 16949 CAST MANUFFACTURING AND CNC MACHINING MACHINERY အစိတ်အပိုင်းများ။
စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည်စက်ကိုပြုလုပ်သောအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီးစက်နှင့်စက်ကိုခွဲခြား။ မရသောသီးခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ထိုစက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်ပစွမ်းအင်ကိုရရှိရန်အသုံးပြုသောဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာအားဖြင့်လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ အတွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များ၊ ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်များ)၊ စက်၏ထုတ်လုပ်မှုကို (ဥပမာစက်ကိရိယာရှိကိရိယာကဲ့သို့) သိရှိပြီးအဓိကမောင်းနှင်သူ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအားကိုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောဂီယာနှင့်ဂီယာနှင့်လိမ်ဂီယာယန္တရားသို့ပို့ပေးသည့်အမှုဆောင်အစိတ်အပိုင်း စက်ကိရိယာ) စက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေသည့် (ဥပမာစက်တွင်မောင်းနှင်သောအပိုင်း၊ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်သည်) ကိုစစ်ဆေးသောနှင့်ထိန်းချုပ်သည့်စနစ် (စက်ကိရိယာရှိ CNC စနစ်) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှင့်ကွပ်မျက်အစိတ်အပိုင်း။ အဆိုပါတိုင်းတာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်) ။ စက်ထပ်မံကျိုးပဲ့သည်, အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမကလိုအပ်သည့်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုလည်းပါဖြည့်ဆည်းပေးသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်းစားသုံးခြင်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ အလုပ်သမားနှင့်ပစ္စည်းများ။
ဘီးများ၊ ကိုယ်ထည်များ၊ အဆက်အစပ်များ၊ ဤအမျိုးအစားနောက်ကွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုထိရောက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်အသိအမှတ်ပြု၊ ရှာဖွေ၊ ထုတ်လုပ်သောစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုပ်များနှင့် CNC စက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစက်မှုထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုရရှိနိုင်သည်။
စက်မှုထုတ်လုပ်သူများက Minghe Casting သည်အားကိုးအားထားရသော၊ အချိန်နှင့်ဈေးသက်သာသောအစိတ်အပိုင်းအမြောက်အမြားကိုထုတ်လုပ်သည့်အခါအမြဲအမှတ်အသားပြုသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သွန်းလောင်းခြင်းကျွမ်းကျင်မှုတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်သောတိကျသောသတ်မှတ်ချက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံထားသည့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
1.Commonly စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ applications များ။
MINGHE ၏အတွေ့အကြုံသည်တိကျသေချာသောသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်စက်လည်ပတ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် cnc machining solution များအားဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်။
၁ ။ ထိုကဲ့သို့သောအရှိန်မြှရိုးတံ, လျှပ်စစ်ဗိုင်းလိပ်တံ, Camshaft အဖြစ်;
၂ ။ headstock box၊ gearbox box၊ အင်ဂျင်သေတ္တာ၊
၃ ။ ထိုကဲ့သို့သောထုပ်နှင့်စက်သီးကိုဆောင်သောအဖြစ်;
4. ချည်အစိတ်အပိုင်းများ: လျှောဝက်အူအဖြစ်;
5. ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ: ထိုကဲ့သို့သောဖြောင့်သွားနှင့်ဆလင်ဒါဂီယာအဖြစ်;
Minghe သည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးစက်မှုထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ သင် Minghe နှင့်လက်တွဲလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရနိုင်သည်။
Minghe ၏သွန်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင်တန် ၂၅၀ မှ ၃၀၀၀ အထိအထိရှိသောစာနယ်ဇင်း ၄၀ တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျပ်အတည်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစားနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုတို့တွင်တောင်းဆိုမှုများအများဆုံးစက်မှုအပိုင်းအချို့ကိုထားရှိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာနှင့်မော်ဒယ်လ်စွမ်းရည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိရောက်စေမည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။
Minghe သည် ISO Certified Die Casting ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးဇင့်နှင့်အလူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်စက်မှုအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်များအထိကြီးမားသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။
စိတ်ကြိုက်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက် 3. အခြားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
ထို့အပြင် Minghe သည် CNC စက်များ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံသွန်းခြင်း၊ သဲပုံခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို Casting ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ထို့အပြင် Minghe သည် CNC စက်များ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံသွန်းခြင်း၊ သဲပုံခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက် Die Casting ပစ္စည်းများ:
Surface Finishing စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်:
CNC စက်မှုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သွန်းလောင်းခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများ -
တိုးမြှင့်ရိုးတံ, လျှပ်စစ်ဗိုင်းလိပ်တံ, Camshaft; headstock သေတ္တာ, ဂီယာအုံ box, အင်ဂျင် box ကို; disc အစိတ်အပိုင်းများ - ဥပမာ - အဖုံးအုပ်များ၊ ခါးသီးစက်များ၊ လျှော screw နှစ်ခုအဖြစ်; ထိုကဲ့သို့သောဖြောင့်သွား, ဆလင်ဒါဂီယာအဖြစ်; လီဗာ, ပြားအတန်းအစားအစိတ်အပိုင်းများ;
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ Minghe ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး
အကောင်းဆုံးစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံသွန်းလောင်းခြင်းနှင့် Cnc Machining Service ကိုရွေးချယ်ပါ
ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ တောင်အာဖရိကနှင့်အခြားသောနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2015 မှတ်ပုံတင်ထားပြီး SGS မှအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ထုံးစံဓလေ့ တရုတ်သွန်း casting ဝန်ဆောင်မှု မော်တော်ယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင်၏မေးမြန်းမှုကိုပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲခြင်းကိုမြန်မြန်ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် sales@hmminghe.com ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်သင်၏စက်ယန္တရားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။